Supreme Court Youdzwa Maipiro Akaita Kamba yeHarare Central
HARARE — Dare repamusorosoro ranzwa neChina nyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, richida kuti dare iri riture mutongo unoti kamba yemapurisa yepa Harare Central haikodzera kuchengeterwa vasungwa vanorarama nehutachiwana hwe HIV.
Vatongi vapfumbamwe vedare repamusoro soro iri vanzwa chikumbiro chakasvitswa kudare ne ZLHR kwemazuva maviri.
Chikumbiro ichi chinotevera kuchemachema kuri kuita mumwe murume, Va Douglas Muzanenhamo, avo vanorarama neHIV. VaMuzanenhamo vanoti havana kubatwa zvakanaka pavakasungwa muna Kukadzi 2011 vachipomerwa mhosva yokuronga zvekupidigura hurumende vachishandisa nzira dzokuratidzira dzakashandiswa ku Egypt neku Tunisia mukubvisa vatungamiri venyika mbiri idzi pazvigaro.
Rimwe remagweta aVa Muzanenhamo, Va Zvikomborero Chadambuka, avo vanoshanda nesangano reZLHR, vaudza dare iri kuti Va Muzanenhamo vakachengetwa pakamba ye Harare Central apo pavakanyimwa mukana wekunwa mapiritsi avo nenguva. VaChadambuka vakazonopihwa mapiritsi kujeri re Harare Remand Prison pasina tsamba dzekwachiremba dzekuti vanofanirwa kupihwa mapiritsi api.
Rimwe remagweta aVa Muzanenhamo, Va Tawanda Zhuwarara, avo vanoshanda zvakare neZLHR, vanoti kodzero dzaVa Muzanenhamo dzakatyorwa vari muhusungwa pa Harare Central.
VaZhuwarara vanoti hutano hwaVa Muzanenhamo hwakasvika pakaipa panguva yavakanga vari muhusungwa.
Asi gweta rehurumende, Va Tinei Dodo, vanoti nyaya iyi inofanirwa kuraswa vachiti hapana humbowo hwasvitswa kudare nemagweta aVa Muzanenhamo hwekuti zvavari kutaura izvi zvakaitika.
Va Dodo vanotiwo nyaya iyi inofanirwawo kuraswa sezvo magweta aVaMuzanenhamo aifanira kutanga aenda kudare repamusoro ukuo kwaizononyatsopenegurwa nyaya iyi isati yasvitswa kudare repamusorosoro.
Zvichakadai, vatongi vedare repamusorosoro vati vachatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara.
Mune imwewo nyaya dare iri rakatarisirwawo kunzwa chikumbiro chaVa Jealous Mawarire vesangano re Centre for Elections and Democracy in Southern Africa avo vari kuda kuti mutungamiri wenyika azivise zuva richaitwa sarudzo nekukasika sezvo vachiti paramende iripo pari zvino inopedza kuita basa rayo zviri pamutemo musi wa 29 Chikumi.
Zvichakadai, Zanu PF inoti vakambenge vari gavhuna wedunhu re Matabeleland North, Retired Major General Jeva Maseko, avo vakashayikira kuBulawayo neMuvhuro, vachavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika nemusi we svondo.
Hazvisati zvanyotsozivikananwa kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachange varipo here pakuradzikwa kwaVaMaseko sezvo VaMugabe vasimuka munyika neChina vachienda ku mhemberero dzesangano re African Union dzichaitirwa ku Addis Ababa, Ethiopia neMugovera.